I-Mobilenomics: Uma Ungesona Iselula, Awumakethi | Martech Zone
Sizizwa sihle ukuthi sibona ukuthambekela kobuchwepheshe kuza bese sikwazisa ngaphambi kwesikhathi. Besilokhu sikhuluma nge- ukukhula kweselula isikhathi esingaphezu konyaka manje, kepha bamangala lapho senza nje ukuhlolwa okuhlelwa iklayenti lakamuva futhi babengenayo isu leselula… bengekho. Isiza sabo besingeyona iselula, ama-imeyili wabo ebengalungiselelwe iselula, futhi azikho izinhlelo zokusebenza zeselula ekuqedeni… nada.
Kwesinye isikhathi kuthatha ividiyo ukuthola umbono omuhle ngezinto futhi U-Erik Qualman wenza umsebenzi omuhle ekubekeni izibalo zokutholwa kweselula. Iqiniso ukuthi… uma ungekho kuselula, awumakethi.
Tags: u-erik qualmanumabhebhananqobileezokuxhumana
Isikhathi Samaqiniso: Izinyathelo Ezi-8 Zokulungela
Ukuqasha: Uhulumeni wase-US Uzobhubhisa Ukuhweba Kwe-inthanethi
Mar 26, 2013 ku-4: 41 AM
Ukumakethwa kwamaselula kuhlala lapha, akukho kungabaza ngalokho. Izinkampani ezehluleka ukubheka lokhu zizoba senkingeni enkulu emsebenzini wazo wokuhola. Kufanele uqiniseke ukuthi amakhasi akho okufika azomela umkhiqizo wakho, noma ngabe kusetshenziswa luphi ucingo ukufinyelela kuwo.